အချစ်တွေ အပျော်တွေ ခံစားနေ ၊ဘ၀ နှစ်ခုမခြားပါ ၊ကျမတို့လူသားပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » အချစ်တွေ အပျော်တွေ ခံစားနေ ၊ဘ၀ နှစ်ခုမခြားပါ ၊ကျမတို့လူသားပါ
အချစ်တွေ အပျော်တွေ ခံစားနေ ၊ဘ၀ နှစ်ခုမခြားပါ ၊ကျမတို့လူသားပါ
Posted by padonmar on Jan 20, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 54 comments
ဂဇက်ကွန်ဖရင့် ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ မန်းဂဇက်ချစ်သူမျာ စာပေဆု
ပန်းတနော် အလှူတုံးက ကိုပေါက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
လူချင်းမတွေ့ဖူးပေမယ့် စိတ်ချင်းခင်ကြတဲ့ လေထဲကမိတ်ဆွေတွေ စုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးပါလို့။
၀င့်ပြုံးမြင့်ကတော့ တိမ်ယံကြားက ဂဇက်ရွာပါတဲ့။
လေလှိုင်းထဲက (ပိုတိကျအောင်ပြောရရင် အင်တာနက်ထဲက) မိတ်ဆွေတွေ တွေ့ဆုံကြဖို့ အခွင့်အရေးလေး ရခဲ့ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ရှုံးလူ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တုံး တွေ့ကြဖို့ Moonpoem က စီစဉ်ပေမယ့် လူချောင်းပွဲလေးဖြစ်ပြီး တွေ့ခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။
ကြားထဲမှာ အလှူတွေ စီစဉ်ကြရင်း တွေ့ဖူးပြီးသားမိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းလေး ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုပေးပွဲလေး စီစဉ်ဖြစ်ရင်း သူကြီးအဆို ဂဇက် ကွန်ဖရင့် လုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
အင်တာနက်ထဲမှာ ကွန်မန့်တွေနဲ့ နောက်လိုက်ပြောင်လိုက် ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရွာသူားတွေ ဆိုတာ လူသားစင်စစ်တွေပါလားလို့ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ကြရပါပြီ။
ဒီပွဲမှာ အော်ဇီက ဆုလာပေးတဲ့သူရှိသလို
ဟောင်ကောင်က ဆုလာယူသူလည်း ရှိတယ်။
မန္တလေးက ပွဲလာတက်သလို နေပြည်တော်ကလည်း လာတယ်။
စိနတိုင်းက ရဲစည်လည်း မူးမူးနဲ့ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ရောက်လာတယ်။
မန္တလေးက ကိုပေါက်က လေလှိုင်းကြားက ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းအားပေးသလို စွယ်တော်ရွက်ကလည်း မတ်စိတွေပို့ပြီး နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
ဒီပွဲလေးကို မန်ဘာအားလုံးတက်ချင်ကြမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ ဂဇက် မန်ဘာတွေအတွက် အတွေ့အကြုံလေးကို မှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့ တာဝန်က တံခါးမှူးကြီး ကိုဘလက်ဖြစ်ပေမယ့်
မိခင်ကြီးကျန်းမာရေးကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ ကိုဘလက်ခွင့်တိုင်သွားတာမို့ မျက်စိမရှင် နားထိုင်း
လက်တုန်တဲ့ အဖွားကြီး ကျမပဲရေးပေးပါလို့ ငှက်ကထကြီးက ဘီဒိုအာဏာနဲ့ အနိုင်ကျင့်ပါတယ်ရှင့်။
ဒါကြောင့် အားလုံး မျှော်လင့်နေတဲ့ ဆုံစည်းပွဲလေးကို ဖြည်းဖြည်းစောင့်ဖတ်ပေးကြပါလို့ ။
တက်ရောက်သူတွေကတော့ ကြိုတင် စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေပါပဲ။
စာရင်းပေးပြီး မလာဖြစ်တာ မနောဖြူလေး၊ရို့စ်မင်းနဲ့ အိုဘားမားပါ။
ဆုရသူအားလုံး (ကိုယ်စားစေလွှတ်သူအပါအ၀င်) လေးလေးစားစားလာယူသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်သူက လုလင်နဲ့ ဆရာအုပ်ပါ။
စိတ်နဲ့ မှတ်ပြီး ပြန်ရေးရတာဖြစ်လို့ အမှတ်မှားတာ ကျန်တာတွေရှိရင်လည်း ကွန်မန့်တွေနဲ့ ၀ိုင်းအားဖြည့်ပေးကြပါ။
ဂရုပုံနဲ့ မှတ်တမ်းပုံ အချို့ တင်ပေးပါမယ်။
နောက်ပွဲတွေ လုပ်ဖြစ်ရင် ဒီထက် မန်ဘာတွေ ပိုများများလာရဲအောင် ( Privacy ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အနေနဲ့)
ဓာတ်ပုံတွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ တင်ပါမယ်။
ကိုယ့် ဓာတ်ပုံတင်တာ ကန့်ကွက်ရန်မရှိသူတွေ ကွန်မန့်နဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရေးပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အန်တီလေး ရေ စောင့် အားပေးနေပါတယ်
မြန်မြန်တင်ပေးပါ ဗျို့ လို့ ငယ်ငယ် ကလို အော်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ
တကယ်ပျော်ဘို့ ကောင်းတဲ့ ပွဲလေး ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်
အခုထိ မတင်ကြသေးလို့ 
(ကင်မရာမန်းတွေကလည်း အဖွားကြီးတွေကို ရိုက်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ်လေ) :harr:
ဂရုပုံတင်တာလည်း ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါ။
သဂျီးဆီက ပို့လိုက်တဲ့ လက်ဆောင်တွေအပြင် စေတနာရှင် မနိုဗွီ နဲ့ အဘဖောတို့ရဲ့ လက်ဆောင်တွေကို မဲဖောက်ပေးတာကလည်း တကယ့်ကို ပျော်စရာပါပဲ။
ငှက်ကထကြီး ပြောသလို ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ရွာသူားတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ခင်ခင်မင်မင် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ကြဆုံကြ ပျော်ကြရတဲ့ပွဲပါ။ :hee:
နောင်နှစ် နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ဒိ့ထက်ပိုပြီး ရွာသူားတွေ စုံစုံညီညီ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။
အင်တာနက်မီဒီယာဟာ ပရင့်မီဒီယာတွေလိုပဲ အခိုင်အခန့်တည်တံ့တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြကြပါစို့…..
မန်းဂဇက် အဓွန့်ရှည်ကြာစွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေ :hee:
ရောက်ပြီးမှ ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လို့ အိမ်ပြန်ယူပြီးပြန်ဝင်ရတာလေ..
မဆုံရသေးတဲ့ လေလှိုင်းထဲက မိတ်ဆွေတွေအများအပြားနဲ့လဲ ဆုံဖြစ်ရတာပေါ့..
မမိုချိုရဲ့မိခင်ကြီး၊ ကိုနွေဦး၊ ဆရာအုပ်၊ အံစာတုံး၊ ကိုချိုကြီး၊ ကိုကျောက်ခဲ…..
ဟာ…. ဘယ် ရေနိုင်မတုန်း….
အများ မှ အများကြီး…
ပြီးတော့ တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပေမယ့် ၊ အရမ်းကို ရင်းနှီးနေသလိုဖြစ်နေတာ…
သူကြီးရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု မဲပေါက်သဗျ…
မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ အဖြစ် ဂဇက်ရွာသမိုင်းမှာ တွင်ခဲ့ပြန်ပြီပေါ့။
အလှူရှင် ကိုအဘဖော နဲ့ အဘဆွေ အမှူးထားပြီး စီစဉ်သူအားလုံး နဲ့ တစ်ကွ ကြွရောက်ခဲ့သော ရွှေပွဲလာပရိတ်သတ်ကြီးများ ကို အထူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
နုပျိုဆဲနှလုံးသား နဲ့ အစ်မရေ မအိုသေးပါဘူး။
မေတ္တာတွေ နဲ့ လွှမ်းပြီး ပျိုမြစ်နေဆဲပါ။
ကျွန်မလဲ အိမ်မက်ထဲမှာ ပွဲကို ရောက်ခဲ့တယ်။ :hee:
ဒီတစ်ခါ တွေ့ဆုံပွဲက အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ် .. (သူကြီးရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု မဲပေါက်ခဲ့လို့လေ .. )
အခုလို အဆင်ပြေတာကလဲ ဦးဦးပါလေရာနဲ့ အန်တီပဒုမ္မာတို့ရဲ့ ကြိုစားအားထုတ်မှုအများကြီးပါပါတယ် …
အစီအစဉ် အစအဆုံး announcer လုပ်သွားတဲ့ ရွှေတိုက်စိုးကလဲ တကယ့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မှီတယ် … တစ်စက်ကလေးမှ မပျင်းရအောင် တင်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ် ..
ဦးကျောက်ခဲနဲ့ ဦးကြီမိုက်တို့ မိုက်ခဏခဏ ၀င်လုပြီး ပြောနေတာကလဲ နားထောင်လို့ မ၀နိုင်အောင် ရယ်နေရပါတယ် … ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်ကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ..
နောက်ထပ် ၆ လ ကြာရင်လဲ တစ်ခါထပ်ပြီး စီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ချင်ပါသေးတယ် ..
နောက် ၆လ မှာ ထပ်လုပ်တော့လည်း နောက်၆လ မှာ တခါ ထပ်ပြီး လက်ခုပ်လာ တီး ပေးအုန်းမယ်..
မနေ့က ပွဲကတော့ တကယ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်.. အချိန်က တိုလွန်းလို့ စကားပြောလို့တောင် မ၀ ခဲ့ဘူး။
ဓတ်ပုံကိစ္စ အထူးပြောဖွယ်မရှိပါခင်ဗျာ ။ ကောင်းမယ်ထင်သလို တင်နိုင်ပါတယ် ဗျာ ။
( လှတာလေးတော့ ရွေးတင်ပေါ့ဟဲဟဲ )
ကျနော့် အနေနဲ့ ကတော့အထူးကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်
အားလုံးကို အခုမှတွေ့ ဖူးတာမို့လူစုံအောင်မနဲ လိုက်နုတ်ဆက်ရင်း
ပြောစရာစကားတွေ မပြောနိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ကုန်လွယ်လွန်းတဲ့  အချိန်ကိုပဲ
အပြစ်တင်နေမိတယ် ။ ဒီလိုပွဲမျိုးကြုံဖို့ တစ်နှစ်တိတိစောင့် ရမှာကိုပဲ
လက်ချိုးရေနေရတော့ မှာပါ ။
အခြေအနေနဲ့  အချိန်ကြောင့်လူတစ်ချို့ ကိုတိုက်ရိုက်နှုတ်ဆက်ခွင့် 
မရလိုက်တာကိုလည်း မချင့် မရဲဖြစ်မိပါတယ် ။
ပြီးတော့ကျနော့် ကိုအမှတ်တရ လက်ဆောင်ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြတာကိုလည်း
မမျှော်လင့် ပဲရခဲ့ လို့ အတိုင်းမသိ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ။
ကျနော်တစ်ခါက အမှတ်မထင်ပြောခဲ့ တာလေးကို မှတ်မှတ်ရရ သတိတယနဲ့ 
လက်ဆောင်ချည်းမြှင့် ပေးခဲ့ တဲ့  အစ်မပဒုမ္မာကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ………..
တက်မယ့် စာရင်းထဲပါပေမယ့် ကျန်းမာရေးကြောင့် မလာနိုင်တဲ့ ခိုင်ခိုင်၊ဘားကမ့်ပွဲ တာဝန်ကျနေတဲ့ နွေးသီး၊reserve ဆိုတဲ့ မိုးမင်းသားတို့ကို မျှော်နေမိပေမယ့် မလာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
လူမရောက်ပေမယ့် “လေ”ရောက်သွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့ မိတိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။.
ပိုစ်အများဆုံးရေးတဲ့အတွက် လက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့(ကျနော့်ဘ၀မှာ အမှတ်တရဖြစ်နေစေမယ့်)့ နာရီလေးကို
ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့လေးအတွက် ပြန်လည် လက်ဆောင်ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့
M လုလင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ဒီလက်ဆောင်လေး က ဂုဏ်ယူစရာလည်းကောင်းပါ၏။
ကျနော် အားသမျှကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေဖဲ့ပေးပြီး အင်မတန်မှ ဆိုးဝါးလှတဲ့ကော်နက်ရှင်ကြားမှာ
ပုံတင်ပြီးခါနီးမှ ကွန်နက်ပြုတ်ကျသွားလို့ အစဆုံးစိတ်တိုတိုနဲ့ပြန်လုပ်ခဲ့ရတဲ့
ခရီးထွက်တယ်ဆိုပြန်ရင်လဲ (သူများ လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်နေတော့ ) ပိုင်ရှင်ကျေနပ်အောင် အလုပ်ကို မပြီးပြီးအောင်အမြန်လုပ် အားတာနဲ့ဓါတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်။
ရောက်တဲ့အရပ်မှာ မနက်အစောကြီးထ လမ်းလျောက် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီငှား ဓါတ်ပုံလေးတွေရဘို့
မန်းလေးမှာနေပြန်ရင်လဲ ကိုယ်ပါတ်ဝန်းကျင်က လှတာလေးတွေ သူများတွေပြချင်တော့
ဥပုဒ်နေ့အလုပ်ပိတ်ရက်ဆို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်
မန်းလေးဂေဇက်မှာ စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာ အခြားသော ဆိုက်များမှာ ပိုစ်တွေရေးနေတာ အပုဒ်ခြောက်ဆယ်လောက်ရှိနေပါပြီ။
ကိုယ့်ဝါသနာအရ ကိုယ်သိတာလေး မျှပေးချင်စိတ်ရှိတာကြောင့် ကိုယ်ဖြတ်သန်းမူ့လေးတွေကို
စာဖတ်သူအကျိုးရှိအောင် ဖတ်ချင်အောင် နှစ်သက်အောင် တွေးလိုက်ရေးလိုက်ရတဲ့
စာတွေ အတွက် ကျနော်အချိန်တွေအများကြိးပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုစာရေးဘို့အတွက် ပုံတွေတင်ဘို့အတွက် ကျနော်ပေးလိုက်ရတာက
အရင်က ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို တစ်နေ့တစ်ကားကြည့်တတ်သူက ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။
နောက်အရင်က အားတာနဲ့စာဖတ်နေတတ်တဲ့ကျနော် ဂျာနယ်အချို့နဲ့ ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့စာအုပ်အရင်လိုဖတ်ဘို့အချိန်မရတော့ပါဘူး။
အရင်က အိမ်မှာ အားတာနဲ့ မိုက်ခဲ လေ့ရှိတဲ့ကျနော် ကျနော်ကာရာအိုကေသီချင်းခွေတွေဖုံတက်နေတာကြာပေါ့။
အင်တာနက်ဆိုင်မှာနေ့စဉ်ကုန်ကျမယ့်စာရိတ်အတွက် ကျနော်ရဲ့ အချို့သောအသုံးစားရိတ်ကိုလျော့ချ။
ညကိုးနာရီထုိးတာနဲ့အိမ်နားက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အပြေးအလွားသွားပြီး ညဆယ်တစ်နာရီ ဆယ်နှစ်နာရီထိ တကုပ်ကုပ်နဲ့ပုံတင် စာရေး ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ
ကျနော့်ဘ၀ထဲက နာရီပေါင်းများစွာ နုတ်ယူလို့သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တင်ခဲ့သမျှ ဓါတ်ပုံ တင်ခဲ့သမျှစာတွေ မှာ
ဂုဏ်သိက္ခာ မဲ့လောက်တဲ့ အရေးအသား တွေ ဓါတ်ပုံတွေ မပါတာခဲ့တာကတော့ သေချာပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ကျနော်က အရေအတွက်ရဘို့ အဓိက ထားပြီး ရေးသားနေသူတစ်ယောက်လဲမဟုတ်ပါဘူး။
မျက်စေ့က မော်နီတာပေါ်က စာလုံးလေးတွေကိုဖတ်နိုင်တုန်းလေး
ဘာဘဲပြောပြော ပိုစ်အရေအတွက်အများဆုံး တင်နိုင်လို့ လက်ဆောင်တစ်ခုရခဲ့တာကို ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျနော်ကို ဒီလိုလက်ဆောင်လေး ပေးဘို့ သတိရသူ အကြံပေးသူ စီစဉ်ခဲ့သူအားလုံးကိုလည်း
နောက်စကားဆက်စပ်လို့ပြောရရင် မန်းလေးဂေဇက်က ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့်လို့ပေးတဲ့
မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်းကို 2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတစ်ကြိမ် 2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတစ်ကြိမ်
ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုက တတိယအကြိမ်ရဘို့ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကိစ္စဆိုတာကိုတော့
အသက်ကြီးလာလေလေ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းက ကျဆင်းလေလေ မို့ပါဘဲ။
ဒီလိုပိုစ်တင်ဘို့ဆိုတာကဥာဏစွမ်းအား တင်မကဘဲ ကာယစွမ်းအားပါ စိုက်ထုတ်ရတဲ့အတွက်
အခုရတဲ့ လက်ဆောင်လေးက လူရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းခဲ့တာတွေအတွက် အသိအမှတ်အပြုခံရတယ်လို့ လဲ စိတ်ထဲမှခံယူပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ဒီလက်ဆောင်ရတဲ့နာရီလေးက ကျနော်အိမ်မှာချိတ်ထားရင် ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်မှာက ဟိုပစ္စည်း ဒီပစ္စည်းကြော်ငြာသူတွေက လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့နာရီတွေရှိနေလို့ပါဘဲ။
အခု ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့ကို ပြန်လည် လှူဒါန်းဘို့ပေးအပ်လိုက်တဲ့အတွက် ကျနော်အိပ်မှာချိတ်ထားတဲ့စာရင်
လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာ အသုံးတဲ့သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်ပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်တဲ့နာရီလေးကို လက်ခံပေးတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(မေ့သွားတယ်ဗျာ ကိုယ်လက်ဆောင်ရတဲ့နာရီလေးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ဘို့ မမှာလိုက်ရဘူး။)
ဘယ်လိုဘဲပြောပြော ဒီနေ့လေး 20-1-2013 နေ့လေးက အင်မတန်မှ မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဆိုတာကိုတော့ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာအသေအချာပါဘဲ။
နောင် လာမယ့်ခြောက်လမှာ ထပ်မံကျင်းပမယ့် တွေ့ဆုံပွဲလေးကို အသက်ရှင်နေသေးရင်တော့ တက်ချင်ပါသေးတယ်။
(သူများပိုစ်မှာ လေကြောရှည်မိတာ ကိုယ်ရည်သွေးသလိုရေးမိတာ ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ)
အနောက်တိုင်းမှာ အသက် ၇၀ ကို ပင်စင်ပေးမဲ့အသက်လို့ ပြောရင် ၅၄ ဆိုတာ အတော်ငယ်သေးတယ်ဗျို့။
အလုပ်လုပ်တာကလဲပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းမှာလုပ်တာဆိုတော့ ပင်စင်မရှိပါဘူး။
၆၀နားကပ်နေတဲ့ အဘိုးကြီး အားငယ်လို့ပါ…။
ဒီတခေါက် ပွဲမှာ ကိုပေါက် ရတဲ့ ဆု က ပိုစ်အများဆုံး တင်တဲ့ ဆု ဆိုပေမဲ့ အမှန်တော့.. ဇွဲ ဆု ရသွားတာ..
ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ တင်နိုင်တဲ့ အတွက် ရတဲ့ ဆုပါ..
တနေ့ တနေ့ အချိန်ပေးပြီး ရေးဖို့ ရိုက်ဖို့ တင်ဖို့ ဆိုတာ.. တော်တော်လေး ခက်ပါတယ်..
အချိန်မှန် ပုံမှန်လေး တင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုကတည်းက ဇွဲလုံ့လ မပါပဲ ကို မရပါဘူး။
မြန်မာပြည် အင်တာနက်က အားလုံး သိတဲ့ အတိုင်းပဲ.. အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ် ဆိုတဲ့ သီချင်း အတိုင်း.. အနှေးဆုံး နဲ့ အလေးဆုံးတွေ ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှသာလျှင် ပုံ တပုံ စာတပုဒ် အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ရတာပါ။
ဘာပဲ ပြောပြော အလှူ အတွက်လည်း ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အမှတ်တရတွေနဲ့ အသက်ရှည်ရှည် မဒမ်ပေါက် နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုးလို့ ချစ်နိုင်ပါစေ။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကျင်းပရေးအတွက် အားလုံး စုပေါင်း ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
နေရာကြည့်တာ အခန်းအနားပြင်ဆင်တာ လိုအပ်တာတွေ ရှာဖွေစိုက်ဖြည့်တာ စသဖြင့် အဓိက ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေက
ကျုပ်ကတော့ တာဝန်အပျက်ကွက်ဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။
အခုရက်ပိုင်း တခြားကိစ္စတွေရှုပ်နေလို့ သူများပွဲစီစဉ်ပြီးမှ ကျော့ကျော့လေးသွားတာ..
ရွှေတိုက်စိုးကတော့ အစအဆုံး တကိုယ်တော်ကြဲသွားတာ..
ရွှေတိုက်စိုး မိုက်ခဲပြီး တကိုယ်တော် ကြဲနေတာ.. နောက်ပိုင်း ရွာရဲ့ အလှူ မင်္ဂလာ ပျော်ပွဲရွင်ပဲ စတာတွေ အတွက် အငှားလိုက် မိုက်ခဲ လို့တောင် ရတယ်.. တင်မိုးလွင် နဲ့ နင်လား ငါလား.. ( အရပ် ကို ပြောတာ မဟုတ်)
တီတီလေး …ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံကို လုံးဝ တင်ခွင့်မပြုဘူးနော် ……..
ဟုတ်တယ်ဗျာ အတော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးပါ…
ကံစမ်းမဲတွေကလဲ မိုက်သဗျာ…….ဟိဟိ အခုကို တဂျီးပေးဒဲ့ ၀ယာလက်ခ် မောက်စ် လေးနဲ. ကောမန်.လေးရေးနေ.ဒါ…….ဟိဟိဟိဟိ
မနိုဗွီကလဲ..လူအပြည့်ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးသေး…
ကို ပီချိုကြီးကလဲ ကီးချိမ်းလေးတွေနဲ. လက်ဆောင်ပေးတာ……..
ခေါက်ဆွဲကြော်ကလဲ ကောင်း၊ ယိုးဒယားဟင်းချိုကလဲ စပ်စပ်လေးနဲ. မိုက်သဗျာ..
အကိုကြီး ရွှေတိုက်ကိုလဲ ကြိုးစားပန်းစား အပျော်တွေကူးဆက်နိင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ အတွက် စိတ်ထဲက ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း ပြောပါရစေ ဦးအမတ်လဲပါတယ် ဘဘကြီးပါလေယာ ရော တီတီ ပဒုမ္မာ နှင့်အန်တီ မမ ဟာဂျာ ..ဟာဂျာ အကုန်လုံး ပါတယ်…
ကျနော့်ပုံလည်းတင်နိုင်ပါတယ်.. တခြားလူတွေပုံလည်း တင်ပါဗျားးး
ကွန်ဖရဲင့်န်တက်သူများ.. ရာထူးတိုးမှာဖြစ်ပါတယ်… လို့..
အဲဒါ.. စာရင်းလေးပို့ပေးပါဦးလို့.. ပွဲစီစဉ်သူများကို.. တောင်းဆိုပါရစေ..
ဒီနှစ်ထဲ.. နောက်ပွဲတခုဆိုရင်တော့.. လာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့… အကြောင်း…
လူလုံးပြသူများ ရာထူးတိုးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် မင်းအုပ်စိုးတို့ သဇင်တို့ကို ဂန်ဒူးဆောင်နာယကများတင်သင့်ပါဂျောင်း (ကိုယ်တိုင် မလာခဲ့ရသဖြင့် မလိုတမာပြောချင်း.. ) :harr:
မနှစ်က ပန်းတနော်ခရီးမှာ တစ်ခါပြ..
ဒီနှစ် ဆုပေးပွဲမှာ ထပ်ပြတဲ့ အနော်တို့ကိုရော ရာထူးထပ်တိုးပေးမှာလား..
ပြောပေးပါ ဗဂျီးခိုင် ခင်ည.. ဟိ ဟိ
တကယ်ပြောတာလားဟင်၊ဒီပို့စ်မှာ ပြောထားတာဆိုတော့ ရက်ကော့ပြန်ရှာချင် လွယ်လွယ်လေးနော်။
” အလှူရှင် ကိုအဘဖော နဲ့ အဘဆွေ အမှူးထားပြီး စီစဉ်သူအားလုံး နဲ့ ”
မှန်တာပြောရရင် ၊ အဘ စိတ်ထဲက ကြိုမှန်းထားတဲ့ စရိတ် ရဲ့ ၊
တစ်ဝက်လောက်ပဲ ကုန်ခဲ့ပါတယ် ။
ရွာသူားတွေကို ကျွေးရတာ သိပ် အား မရလှပါဘူး ။
အဲဒီတော့ ၊ အာသာပြေသွားအောင် ၊
နောက်တစ်ပွဲ ထပ်ကျွေး လိုက်မှ ထင်တယ် ။
ဟို လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဂျော်နီ ဆိုတဲ့သူ ရဲ့ သေရည် လေးမှ မပါရင် ၊
ပျော်ရတာတွေကလဲ နဲနဲပေါ့တယ်လို့ တစ်ချို့ ရွာသူားတွေ က အဘကို ပြောကြတယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ဟီ ဟိ ။
တဝတပြဲ စားချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိသူမို့ ချင့်ချိန်လိုက်ရတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က လူချောင်းပွဲဆိုတာလေးရယ်… ကျွန်တော့်နာမည်လေးရယ်ကို သမိုင်းကြောင်း ပြန်လှန်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း… အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ အမှန်တော့ ရွာထဲမှာ တွေ့ဆုံပွဲလေးဖြစ်ဖို့ကို ကျွန်တော်ကစပေးလိုက်ရာမှာ Moon Poem က အားတက်သရော စီစဉ်တာပါပဲ… ကျွန်တော်လဲ သွားဖြစ်တယ်ပေါ့.. ခက်တာက ဘယ်လိုဝတ်လာပါတို့၊ ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုပါမယ်တို့မပါတော့ ကျွန်တော်လဲ သွားစောင့်နေတာပေါ့… ဘယ်သူတွေများလာလေမလဲလို့… ဘယ်သူမှလဲ မတွေ့မိပါဘူး… ဒီလိုပဲ ၀င်/ထွက်စားသောက်နေကြသူတွေကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး… အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ရွာထဲမှာ ခုလောက်လဲ စည်းစည်းလုံးလုံးမရှိကြသေးသလို မျက်နှာပြဖို့လဲ အတော်လေးကြောက်နေကြတာလား..
အဲဒီတုန်းက ထင်ရှားတဲ့ စာရေးသူများဆိုရင် ဆူး၊ အီးတုန်း၊ လေးပေါက်၊ ဦးဖက်၊ ရွှေမင်းသား၊ နိဂိမိ77၊ နေ၀န်းနီ၊ အူးကြောင်၊ နိုဇိုးမိ၊ ကိုယင်ကောင်(ကိုရင်အောင်)၊ နွယ်ပင်၊ အီးရိုး(eros)၊ (ဦး) လင်းမွေ၊ Captain America၊ အဘ FR၊ ကိုသော်ဇင်(လွိုင်ကော်)၊ wai wai၊ ရန်ဖြစ်ဖော်ဖြစ်ဖက် နန်းမတော် မယ်ပုခ်ျ ၊ ဘီလူးကြီး အစရှိသည်များ (တစ်ချို့လဲ မမှတ်မိတော့ပါ) တို့ ရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်… ကျွန်တော်လဲ ဒီရွာလေးကို သံယောဇဉ်ရှိနေတော့ ရွာထဲမှာ မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ စာရေးနေကြသူတွေချင်း ခင်မင်ချင်တာနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေး လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး အစဖော်ပေးလိုက်ရာကနေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာကြပြီး တွေ့ကြမယ်ဖြစ်လာပါလေရော… တစ်ကယ့်တစ်ကယ်နေ့လဲကျတော့ ဘယ်သူမှ မလာကြတော့ဘူး… နောက်တစ်ပါတ်နေတော့ ဦးဖက်က သူ မြေနီကုန်းက City Mart က ကော်ဖီဆိုင်မှာ ကင်မရာလွယ်ပီး စောင့်နေသူဟာ သူဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ တွေ့ကြဖို့ ဆော်သြပြန်ပါရော… အဲဒါလဲ ဘယ်သူမှ မသွားဖြစ်ကြဘူးထင်တယ်… သိပ်မကြာပါဘူး… အဲဒီပွဲလဲပြီးရော အတော်စာရေးသွက်သူများ ရွာထဲက လက်တောင်မပြပဲ ထွက်သွားကြတာတွေ မြင်မိပါတယ်..
ပရောဂမကင်းတာပဲလား၊ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲလားမသိ… ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားသူများ၊ လက်ရည်မတက်လာပဲ လက်ရည်ကျသွားသူများကို ယခုလို အောင်မြင်နေသည့် ဆိုက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် မြင်နေရချိန်မှာတော့ သတိတရ ရှိနေမိပြန်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ပျော်သည့်အခါ၊ ၀မ်းနည်းသည့်အခါ၊ ရင်ဖွင့်စရာ ရှာမရသည့်အခါ ယခုမန့်သလေးဂွဇွတ်ကြီးကို ၀င်ကြည့်မိသော်လည်း အရင်ကလိုတော့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ချစ်ခင်ခြင်းမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ လူမှုရေးကိစ္စများရှုပ်ထွေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း ယခုကဲ့သို့ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးသွားသည့် ပထမဆုံးအကြိမ် စုပေါင်းတွေ့ဆုံပွဲကြီးကို အဝေးမှနေပဲ အားပေးလိုက်ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ယခုတစ်ကြိမ်မှာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သူ Moonpoem ရဲ့ မဆုတ်မနစ် အားထုတ်မှုကိုလဲ ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော် မေလမှာ ပြန်လာစရာ မလိုတော့ပါကြောင်း…
ကိုရှုံးလူရေ တမြန်မနှစ်က အဖြစ်အပျက်တွေက လွမ်းစရာပါ။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်း ပျောက်သွားခဲ့တာကတော့ အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲတချို့ ကြောင့်ရယ် ပြီးတော့ ရွာသူရွာသားတွေက တကယ် မခင်မင်ကြပါလားလို့ ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်နဲ့ မယုံကြည်ခဲ့တာတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနေ့ ကပွဲကတော့ သံသယတွေအားလုံးကို ချေဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီး အားသစ်ပြန်မွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆင်သင့်ရင် အားလုံးသော ရွာသူရွာသားများနဲ့ ကိုရှူံးလူကိုလည်း တွေ့ ချင်ပါသေးတယ်။
ကျမလည်း လေးပေါက်လိုပဲ ဖုန်းနဲ့ နှုတ်ဆက် ဖို့ စိတ်ကူးမိလို့ အခမ်းနား လုပ်နေတဲ့ တချိန်လုံး အမေတို့ ဖုန်း ကိုခေါ်တာ ခေါ် မရ ခဲ့ ဘူး။ တနင်္ဂနွေ ဆို ဖုန်းခေါ် ရတာ လိုင်း ကြပ် တတ်တာမေ့ ပြီး ထိုင်ခေါ် နေမိတာ။
အင်တာနက် ဆိုင်ကနေ အမေ ခေါ် မှ ပဲ ကောင်းကောင်း ပြောရတော့ တယ်။ ဒီပွဲလေး အောင်မြင်စွာ ကျင်း ပ နိုင်ဖို့ ငွေအား ၊လူအား စိုက် ထုတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့သူတွေ အားလုံး ကို ကျေး ဇူး တင်မိ သလို ကျမ ကိုယ်စား အမေတို့ သား အမိကို ရင်းရင်း နှီးနှီး ၊ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြို ဆို နှုတ် ဆက် ခဲ့ ကြတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ တော်တော် ပျော်စရာ ကောင်း မယ် ဆိုတာ အမေ ပြန် ပြော ပြ ကတည်း က ခံစား မိတယ်။
ူ Moonpoem စီစဉ်တဲ့ပွဲပျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မှာဘဲ
ဦးဖက်တီးစီစဉ်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အပြင်ထွက်မျက်နှာပြကြတာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ကျနော်ရန်ကုန်ပထမဆုံးရောက်တဲ့ 2011ဇူလိုင်လမှာ ရွာသူားအချို့နဲ့ မြေနီကုန်းက ကော်ဖီဆိုင်မှာရယ် အခြားနေရာမှာရယ် သုံးဖွဲ့ ခွဲပြီးတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိတုန်စီစဉ်တဲ့ ပထဆုံးဂေဇက်အလှူပွဲလေးမှာ မတိုင်ခင်မှာ ကျနော်အပါအ၀င် ရွာသူားတွေကော်ဖီဆိုင်မှာ
နောက်တော့ ဦးကျော်သူရဲ့နာမူ့အသင်းကို သွားပြီး အလှူလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း ရွာသူားတွေလှုရင်းနဲ့ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အလျင်းသင့်သလို တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ပန်းတနော်အလှူပွဲ မှာတော့ စီစဉ်သူ ဆူးတို့ မမတို့ကြောင့် ပန်းတနော်အထိ ကားစီးပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးသွားခဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ ရခိုင်အရေးအခင်းအတွက်အလှုငွေပေး ရင်းတွေ့ကြ။
ဒီတစ်ခါတွေ့ဆုံပွဲ မှာတော့ အရင်က မဆုံဘူးတဲ့ ရွာသူားအသစ်တွေပါ လာရောက်ခဲ့ကြတာ အားရပါးရ။
ဒီပွဲကိုမရောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုတော့ နာ တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါက လူအများစုပါဝင်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေကို သတိရတာလေးပြန်ရေးကြည့်မိတာပါ။
တကယ်တမ်း ပထမဆုံးလူများများစပြီးတွေ့ဖြစ်တာ အိတုန်နဲ့ AKKO ကြိုးစားမှုကြောင့်ပါ။
အရဲစွန့်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကို ပို့စ်တင် အလှူလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ အိတုန်လေး ကျေးဇူးပါ။
နာရေးကူညီမှုအလှူသာ မဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလို ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေ ရလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပုံကို အပြင်မှာထက် ပိုချောအောင်
တင်လိုက်ပါအန်တီရယ်ရပါတယ် ဓာတ်ပုံပါမှာကြောက်မှတော့ အစောကြီးကတည်းကလာမယ့်စာရင်းထဲပေးမထားပါဘူး ။ ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်တော့လဲ အသံမကောင်းလို့ရုပ်နဲ့ ထိန်းပြီးပြောသွားရတာဆိုတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
အိမ်သာနဲ့ ရဲစခန်းမှာ မကပ်ဘူးဆိုရင် တင်နိုင်ပါ၏……
မနေ့က ပွဲမှာတော့.. အစီအစဉ် ကြေညာသူ ရွှေတိုက်စိုး ကလည်း မပျင်းရအောင် သွက်သွက်လက်လက် နဲ့ စကားတွေ ပြောသလို.. မိုက်လုလုပြီး မိုက်ခဲ နေတဲ့ ဦးကျောက်ခဲ ကလည်း လူပျိုကြီး ဘွ ကနေပြီး အစွံထုတ်ဖို့ အတိတ်စိမ်းပေးတဲ့ ၀က်ဝံလေး ကို စွန့်ထားခဲ့ ရှာတယ်..
ဗလာမပါ လက်ဆောင်တွေ ပေးတဲ့ မနိုဗွီ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကံစမ်းမဲ ဆိုရင် မပေါက်တတ်လွန်းလို့ တခါမှ မျှော်လင့်ချက်မထားခဲ့တာ ဒေါ်လှ ၁၀ ကံစမ်းမဲ ပေါက်လို့ ပျော်ခဲ့တယ်။
ပွဲ ကို စီစဉ်ပြီး ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ကြတဲ့ လူကြီး အဖွဲ့ဝင်တွေ လူလေး အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မနေ့ကလည်း တကယ်ကို ပျော်ရွင်ခဲ့ရပါတယ်။
လူသိမခံဝံ့ တဲ့ အလုပ် လုပ်တာမဟုတ်လို့ ဓါ့ပုံ ဖေါ်ပြတာ ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါ။
မဖေါ်ပြစေချင်ရင် အစထဲက လာမည်မဟုတ်ပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုတွေ့ ဆုံရတာ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်၊
နောက်တခါ တွေ့ ဆုံပွဲကြရင် backdate နဲ့ ကင်ပွန်းတပ်ပွဲ၊ ဒါမှမဟုတ် နာမည် ပြောင်းပွဲ လုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း
ဓါတ်ပုံတွေ တင်ရန်အတွက် ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါကြောင်းးးး :hee:
မနိုဗွီ ရေ ကျွန်တော် နံပါတ်သုံး ပေါက်တဲ့ ထမင်းဗူးလေး က တော်တော်အသုံးတည့်ပါကြောင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။
မှတ်ချက် – အခြားကိစ္စ တစ်ခုရှိနေလို့ ထမင်းဗူးကို အဲဒီနေရာမှာတင်အသုံးချပြီး ခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် ထမင်းကြော် ပါဆယ် မထည့်မိတာ နောင်တရပါကြောင်း :harr:
မနိုရေ..မွန်မွန်က နံပါတ် (၄).. ခွက်လေးနှစ်ခွက်ပါ… နှစ်ခွက်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားရတာပေါ့နော်… လေးကျောက်ရဲ့ အရုပ်ကိုလည်း ရလိုက်ပါတယ်…. ဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတာမို့ ကျေးဇူးကဘာဆာရောပါလို့…
ခင်မင်ရတဲ့ရွာသူားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရလို့ စီစဉ်ပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ပျော်ရွှင်စရာ ပွဲလေးကိုပြန်မြင်လာအောင်ရေးပေးတဲ့ အမပဒုမ္မာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ချင်ပါတယ်…ကန့်ကွက်စရာမရှိပါကြောင်းလဲ သတင်းပို့လိုက်ပါတယ်နော်…
ကျုပ်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဓါတ်ပုံမရိုက်ကြလို့ ကန့်ကွက်စရာလဲမရှိ မကန့်ကွက်စရာလဲ မရှိပါကြောင်း..
သများတို့ အပျိုရီးများ စားပွဲဝိုင်းကိုရော မှတ်တမ်းတင်ထားဝူးလားဟင်။
ကြွားစမ်းဗျာ ရောက်တဲ့သူတွေ အားရပါးရ
မရောက်လိုက်၇တဲ့သူတွေ့ကတော့ ဖတ်ပြီး အားကျ
ရွာသူ ရွာသားတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေ့ဆုံကြရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာရပါတယ်….
ဓါတ်ပုံတွေ တင်ဖို့အတွက်လည်းကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူးရှင်….
ဦးမာဃ နည်းနည်း ရိုက်ခဲ့ပါတယ်
တိုက်တိုက်…တို့ စုံတွဲနဲ့လေးလေး.ကြီးမိုက် ..တို့ ..ပြီးရင်..
အဲင်္ဒီ ပွဲကို…..သားသား..အရင်ရောက်တာ ။
အဲးဒီ ပွဲကို လာချင်လွန်းလို့ …
မနက်5း00 ထ ပြီး.ရေချိုး..လိုက် ရတယ် ။
ပွဲ မရောက်လိုက်ပဲ.. ချမ်းလို့ ..တေတွားမှာတောင် စိုးရဒယ် ။
ပုံတွေ တင်ဖို့ ကတော့…..
ဦးမာလက ပြောသလိုပဲဗျိ်ု့ …
ဟုတ်ကဲ့ ဓာတ်ပုံတင်ဖို့ ခွင့်ပြုကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ပွဲတွေမှာလည်း ကျန်မန်ဘာတွေ တက်ရဲအောင် ဂဇက်မန်ဘာတွေဟာ သူတပါးရဲ့ Privacy ကို ထိန်းသိမ်းပေးကြကြောင်း သိသာစေဖို့ပါ။
မှတ်တမ်းတင်တဲ့ လုလင်နဲ့ ကျမ အားချိန်စောင့်ရင် ပုံမြင်ချင်တဲ့ ရွာသူားတွေ လည်ပင်း ပဒေါင်မ ဖြစ်မှာစိုးလို့ လူပြိုကြီး အမတ်မင်းနဲ့ အရီးလတ်တို့ ကြိုးစားတင်ပြီး တင်ထားပါတယ်။
ပုံတွေအတွက် ကန့်ကွက်စရာမရှိပါကြောင်း အန်တီရေ…
အန်တီ့ရဲ့ ပို့စ်တွေကိုဖတ်ပြီး ရွာပေါ်မှာထားတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ စေတနာကို တကယ်လေးစားမိပါတယ်လုိ့…
ဒီနေရာကနေ ဖွ .. အဲ .. ပြောလိုက်ရအုံးမယ် ..
ကရဲစည်တို့ မူးချက်က လွန်ပါတယ်ဗျာ …
ကန်တော်ကြီးကို ဆယ်ပတ်လောက် ပတ်တာတောင် ပီ၃ ကို တွေ့ဘူးဒဲ့ …
ဘယ်တွေ့မလဲ မူးမူးနဲ့ လိုက်ငမ်းနေဒါ နေမှာပေါ့နော့ …
ကျနော်လည်း လာမယ် .. လာမယ် နဲ့ အားခဲထားတာဗျာ …
ကပ်လွဲသွားတယ် .. အတော် ပျော်စရာကောင်းမယ့် ပွဲလေးပါပဲ အန်တီရေ ….